Niova hevitra i Rosia, nangataka tamin’ny Twitter amin’ny hametrahana ny rakitahirin’ny Rosiana ho ao an-toerana ihany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2015 16:26 GMT
Manamarika kihondalana amin'ny politikan'ny mpanao fanivanana manoloana ireo tranonkalam-pamahanam-bilaogy fohy izao fangatahana vaovao izao, noho ny nilazan'ny Roscomnadzor tany aloha tany fa tsy tafiditra ao anatin'ny fepetran'ny lalàna ny Twitter. Tamin'ny 17 Jolay 2015 Atoa Alexander Zharov, lehiben'ny Roscomnadzor, niteny tamin'ny mpanao gazety fa tsy noheverin'ny mpanao sivana federaly ho “fampahafantarana manokana” ny karazan-drakitahiry nangonin'ny Twitter.
“Nanova ny fankatoavan'ny mpiserasera ry zareo volana maromaro lasa izay. Ary raha mamaky izany ianao, dia tsy maintsy manome amboaran'angotahiry ny olona, ary izany ao amin'ny fahatakaranay amin'ny ankapobeny dia mahatafiditra ny mombamomba ny olona tsirairay ary [manao izay hahazoana manatanteraka] ny famantarana olona iray manokana,” hoy ny lehiben'ny mpandrindra, Alexander Zharov, araka ny notsongain'ny Financial Times. Nandà ny haneho hevitra amin'ity raharaha ity ny solontenan'ny Twitter.
Nampanantena ny hanaramaso fandraharahana an'aterineto 317, Rosiana sy Iraisampirenena, mandrapahatongan'ny faran'ny taona 2015 ny Roscomnadzor, saingy nolazainy fa tsy ao anatin'ireo ny Google sy ny Facebook. Vao haingana teo, nanambara ny sampandraharaha rosiana misahana ny aterineto fa hanomboka hisava ny fidiran'ny tambajotra sosialy ao amin'ny lalànan'ny fanomezana fangitra ny rakitahiry amin'ny 2016, mbamin'ireo fandraharahana ara-bola an'aterineto sy tranonkalam-pivarotana antserasera. NIlaza i Zharov fa atao “ampahibemaso” araka izay azo atao” ny fisafoana ary nampanantena fa ho azo jerena amin'ny volana desambra amin'ity taona ity ny lisitry ny orinasa ho tratran'izany fisafoana izany.